Ikhehla ligajwe yisikhwele lazibulala nonkosikazi | isiZulu
Ikhehla ligajwe yisikhwele lazibulala nonkosikazi
Iphoyisa lizibulale nengoduso yalo eKZN
Iphoyisa lizibulale nonkosikazi walo
Iphoyisa lizibulale nentombiyalo
Durban - Usale ubambe ongezansi umphakathi waseGeorgedale KwaZulu-Natal ngemuva kwesigameko sowesilisa osekhulile okuthiwa udubule unkosikazi wakhe maqede naye wazingqokloza bafa bobabili, kubika iSolezwe.
Lesi sigameko senzeke izolo ekuseni kanti laba abebeshadile kuthiwa bebehlala bobabili kodwa akucaci ukuthi bebebangeni kuze kufike ekufeni kwabo, kodwa abanye abakhulumela phansi bathi bekusolwa isikhwele kumkhulu.
Owesilisa kuvele ukuthi uneminyaka engu-64 kanti inkosikazi yona ibineminyaka engu-54. Amaphoyisa athe azoqala azise amalungu omndeni ngalesi sigameko ngaphambi kokuthi adalule amagama abo.
Ikhansela lale ndawo eku-Ward 5, uMnuz Bhakabakubo Sosibo, uthe ubuye edolobheni ntambama wazithela phezu kwabantu abebebabaza isihluku esikhonjiswe yilo wesilisa osekhulile.
“Imibiko esisayitholile ngeyokuthi abashonile bebebodwa ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko sokudubula. Kungenzeka ukuthi kuqale kwaba nengxabano eholele kulesi sigameko. Indodana yabo ibingekho ngesikathi sesigameko kodwa ngibikelwe ukuthi ibisitsheliwe ngokwenzekile,” kusho uSosibo.
Amaphoyisa esiteshi saseMpumalanga asiqinisekisile lesi sigameko sokufa kwalaba abebeshadile.
ULieutenant Colonel Vincent Mdunge okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uthe umufi usebenzise isibhamu sakhe engqokloza owakwakhe ngenhlamvu.